ထာဝစဉ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ဒီကဗျာလေးဖတ်ပြီး ပြုံးနေမယ့် အန်တီစုကို ပြေးမြင်လိုက်သေးတယ်...
အန်တီစုက ဆရာတင်မိုးရဲ့အကြောင်း ကောင်းကောင်းသိပြီးသားပါလေ...
ကိုလူထွေးလဲ ဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ပိုစ့်တင်ထားတယ်...
ဘဘ ဆရာကြီး ဦးတင်မိုး ရဲ့ဒီကဗျာလေး ဖတ်ရတာ
ရင်ထဲ အတော် နာကျင်နေမိတယ် ။ ကိကိရဲ့ အဖေ ကိုလည်း သတိသွားရမိတယ် ။ ဒီမို အရေးနဲ့ ဒီစိ နဲ့ ဘဲ ဖေဖေ ဆုံးခဲ့ ရတာ ၉၃ ခုနှစ်ကပေါ့ ။ ခုချိန်ထိ သူ ဖြစ်စေချင်တာတွေ အကောင်ထည် မပေါ်လာသေးဘူး။
မဝေးတော့တဲ့ထာဝစဉ် ဖြစ်ပါစေ
မမြင်ရလည်း သင်ကရဲဘော်ပင်လို့ ပြောနေရလို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံး ၀မ်းနည်းနေတာပါလေ။
မနေ့ ညကတောင် အကျဉ်းထောင်က အလင်းရောင်လာဖတ်ဖြစ်တယ်။
ခဏခဏ ၀မ်းပဲ နည်းနေရတာပဲ။
ကျွန်တော်လည်း စာရေးချင်စိတ်မရှိပါ။ ရေးပြီးသား စာကို အချိန်အရသာတင်လိုက်ရတာ...
မမြင်ရလည်း သင်က ရဲဘော်ပင် တဲ့... ဟုတ်တယ်အမ... စိတ်တူတဲ့လူတွေအားလုံးလည်း မမြင်ဖူးကြပေမယ့် ရဲဘော်တွေပဲပေါ့...
ဆရာက သူပြောချင်တာကို တိုတို နဲ့ 
ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာ မကြီးချိုသင်းတို့ မအယ်တို့
ဝမ်းနည်းတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်အမတွေ အကိုတွေ ဖြစ်ပျက်ခံစားခဲ့တာကို ငါဘာလို့မသိခဲ့ပါလိမ့်ပေါ့
အခုချိန်ပြောရင် ကိုထွေးကို ပြောခဲ့သလို အခုမှပါကွာလို့ ပြောရင် အပြောခံပါ့မယ်
ဘာဖြစ်ဖြစ် ကျနော့်အမတစ်ယောက်လို ရင်ထဲမှာထားတဲ့ အမကြီးချိုသင်း ခံစားရသလို
တစ်ချိန်ချိန်မှာ အမချိုသင်းအဖေ့အတွက် ဝမ်းသာစွာ ပြုံးနေမယ့် အပြုံးတစ်ခုကို ကျနော်မြင်ချင်ပါတယ်ဗျာ
တခါမှမမန့် ဖူးဘူးဒီတခါမန့် သွားတယ်
ဟုတ်တယ်မမိုးရေ ဘာလုပ်လုပ်စိတ်မပါဘူး အရမ်းခံစားရတယ်
သူ့ လိုအားလုံးကိုစွန့် လွှတ်ပြီး အနစ်နာခံ ကြိုးစားနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းရှိတာတောင်ဘာမှ မပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးတဲ့လား
ကို့ ဆုတောင်းတွေအားလုံးမပြည့်နိုင်ဘူးလို့ မပြောကြပါနဲ့ 
ဆရာကြီးရှိနေသေးရင် နောက်ထပ်သေသပ်လှပတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရေးမယ်ထင်မိတယ်။
“အဲဒီတုန်းက ဆရာတင်မိုးဆိုတာ အသက်ရှုရင်တောင် ကဗျာတွေ ထွက်ကျလာတတ်မယ့်သူမျိုးလို့ကိုလူထွေး ထင်ခဲ့မိပါသေးရဲ့...” ကိုလူထွေးရဲ့ ပိုစ့်မှာ ရေးထားတာလေးပါ..
“ထာဝစဉ်” ကဗျာလေးရော ကိုလူထွေး တင်ထားတဲ့ ကဗျာတွေရော.. ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ သေချာ ဖတ်သွားပါတယ်..
ရင်ထဲမှာ အစဉ်အမြဲ ထာဝစဉ်ပါ ချိုသင်းရယ်…
ကဗျာလေးက သိပ်ကို ထိမိပါတယ်…
နှလုံးသားထဲမှာ အမေ့ပုံရိပ်အမြဲရှိနေတာ့ အမြဲအနားမှာပါ…
ဘ၀ကို မြှုပ် အလုပ်လုပ်သည်
Nice, clear, wide mean, encourage and
I feel something that I can't explain.
ဟုတ်တယ် အစ်မရယ်...ကဗျာလေး ဖတ်ပြီး ရဲ့ပြုံးနေမယ့်အန်တီစု ရဲ့ မျက်နှာလေးကိုမြင်ယောင် မိပါတယ်... ရင်ထဲမှာလဲ နာကျင်မိပါတယ်.. ဘယ်တော့များမှ....း(
မနေ့က အမရဲ့ပိုစ့်အဟောင်းတွေကို လိုက်ဖတ်နေမိတာ.ခုတင်တဲ့ပိုစ့်ကိုကော ဖတ်ဖြစ်တယ်...
အမ ဘလော့စလုပ်တုန်းက အကြောင်းတွေကိုကောပေါ့ အမရဲ့အရေးအသားက ဆွဲဆောင်မှု့ကောင်းလွန်းလို့ ၁ပုဒ် ၁ပုဒ်နဲ့ တော်တော်နဲ့ အဆက်မဖြတ်နိုင်လို့ အိပ်ရာဝင်တာတောင် တော်တော်နောက်ကျသွားတယ်. အမရဲ့ စာတွေကို ဘိန်းစွဲသလိုစွဲနေပြီအမရေ...
အသစ်တွေမဖတ်ရတော့ လည်းကောင်းနေဆဲ အဟောင်းလေးတွေကိုပဲ တလည်လည်နဲ့ဆိုသလိုပေါ့ ..
ဒီကဗျာလေးကြောင့် မျက်ရည်လည်ရင်းပဲ အားတက်မိပါတယ်..ဆရာကြီးရေ။
လူ့ဘ၀ အတိုင်းအဆ ထက် ကျော်လွန် တဲ့.. မှန်ကန် မျှတ မူတွေ အတွက်- မမြင်ရလဲ.. ရဲဘော်တွေ ချည်းပါပဲ..အမ ချိုသင်းရေ။
အင်း... မတွေ့ရလည်း မနေ့က အတိုင်းပါပဲလေ...
အမေစု နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းလေးတွေကို လိုက်ဖတ်ရင်းနဲ့ မမိုးချိုသင်းရဲ့ ဘလော့ကို ထပ်မံပီးရောက်လာတာပါ။ အမေရဲ့ ဇွဲမာန်နဲ့ အာဇာနည်စိတ်ဓာတ် အကြောင်းကတော့ ဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါတိုင်း ပါးပြင်ပေါ် ကြက်သီး ထမတတ်ပါဘဲ။ အမေ့ကို အားပေးချင်တယ်။ အာဇာနည်စိတ်ဓာတ် နဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဗျာ။ မမိုးချိုးသင်း ရဲ့ အဖေရေးထားတဲ့ ကဗျာကို လေးစားစွာနဲ့ အလေးပြုသွားပါတယ်။
အဲဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ရတဲ့အချိန် ရင်ထဲက တဆစ်ဆစ်နာကျင်ခြင်းက
ပိုတိုးလို့လာပါတယ် ဆရာကြီးနဲ့ အမေ့ရဲ့ ပုံရိပ်တွေအာရုံအမြင်မှာ
ထင်လာပါတယ် အမှန်ဆိုတဲ့တရားကို မြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့အမေ
ကျနော်တို့ အားလုံးပေါ်မေတ္တာကြီးမားတဲ့အမေ လွတ်မြောက်ခြင်း
မီးရှုးတန်ဆောင်ကိုင်ဆောင်လမ်းပြတဲ့ အမေ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေ
မကောင်းတဲ့လူတွေ က အသက်ရှည်လွန်းတယ်။
မမချိုသင်းရေ....စာလုံးတိုင်းတလုံးတိုင်းက ဆိုလိုရင်းတွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ဒီကဗျာလေးကိုသေချာလာဖတ်သွားပါတယ်။ အစကတော့ အနော်မမကို တဂ်ထားတာ။ခုမမစိတ်မပါနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ မရေးခိုင်းရက်တော့ပါဘူး။ မမစိတ်တွေပြန်ပါလာပါစေ။ ဒါမှ အသစ်လေးတွေဖတ်ရမှာ ။ဟဲဟဲ
အမေစုက ဆရာကြီး အတွက် ထာဝရ ရဲဘော် ဖြစ်သလို အနော်တို့အတွက်လည်း ထာဝရ အမေပါပဲ။
အမေ့နေ့ ကို ရောက်တော့မှာ မကြာပါဘူး။
ညီစေနော် ဒို့ ရဲဘော်!
ကျေးဇူးပါမိုးချိုသင်းရေ၊ ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာလေးတွေကို မကြာမကြာဖတ်နေရ တော့ ဆရာကြီးအဝေးတစ်နေရာမှာ ရှိနေသေးသလို ခံစားရပါတယ်။
၀မ်းနည်းနေရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး၊ ရဲဘော်တို့။ မုန်တိုင်းကို ကျော်ဖြတ်ကြရအုံးမယ်။
'ထာဝစဉ်' ကဗျာလေးကို ဖေ့စ်ဘွတ် မှာ ထပ်ဆင့် ဖေါ်ပြခွင့်ပြုပါရန်...။
အမရေ သတိရလို့ပါ။ ဘာမှတော့ မရေးဖြစ်သေးဘူး။ အပျင်းပင် အောက်ရောက်သွားလို့ :) နေကောင်းတယ် မဟုတ်လား။
အမေစုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ထာဝစဉ် ခါင်းဆောင်ပါပဲ..
ကျနော့အမကြီးအဖြေက အနီးစပ်ဆုံးပဲ။ ဖုံးကညာတစ်ပါး လုံးရာကပြားတော့မှာပဲ...ငါ့နှယ်နော်
ဟိုင်း ကျွန်တော်က ဒီနေ့မနက်မှ ဆရာကြီးဦးတင်မိုးရဲ့ တစ်လပြည့်ထုတ်တဲ့ ဖလ်မီအိမ်သို့ အလွမ်းစာလေးကို ဖတ်ပြီး ရောက်လာတာပါ။ဆရာကြီးဘလော့က တဆင့်ပေါ့။
ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ။ ဆရာ့လို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်ခွင့်ရတာ၊ ဆရာ့လို ကဗျာဆရာမျုိုး မြန်မာပြည်မှာပေါ်ခဲ့တာ။ တကယ်ပါ။ စာအုပ်ဖတ်လက်စ တန်းလန်းကိုပဲ အွန်လိုင်းပေါ်တွေ့တဲ့ ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းကို ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဆေးလိပ်လဲတို နေလည်းညိုပြီ ဆိုတဲ့ ဧည့်သည်ကြီးကဗျာနဲ့
အလှကိုယ်စီဆိုတဲ့ ကဗျာလေးတွေက ကျွန်တော့်ရင်ထဲနေရာယူထားတာကြာပါပြီ။
မခင်ဦးမေထက်တောင် ဒီ blog မှာပိုလူစီသလိုပဲ။ quality ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်
နေတိုင်းခေါင်းမလျှော်ရဘူးတဲ့ ဆြာဝန်ကမှာထားတယ်။ အဲ့ဒါခိုးလျှော်တာ
ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ အဲ့ဒါအနော့အကြောင်းရေးထားတာမဟုတ်ဘူးလေ။ :(
ဒေါ်ရွှေခိုင်ရဲ့ ကောမင့်အရှည်ကြီးကို ဖတ်လိုက်ရပြီး ဒေါသထွက်မိတယ်...
မချိုသင်းရော အဲဒီအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသေးတာလား...
အဲဒါကြောင့် စာမရေးဖြစ်တာဆိုရင်တော့ ဒင်းတို့တတွေကို ဒီနည်းနဲ့ ပျော်ခွင့်မပေးပါနဲ့ဗျာ...
ကျွန်တော်တို့တတွေ မချိုသင်းအနားမှာရှိတယ်... မချိုသင်းနဲ့ စိတ်တူ.. ရည်ရွယ်ချက်တူ.. စေတနာတူကြသူတွေ မချိုသင်းဘက်မှာ အများကြီးရှိတယ်...
ကိုလူထွေးထင်သလို မဟုတ်ဘဲ ထိုးမယ့်ဆင် တစ်လှမ်းဆုပ်နေရုံ ဆိုရင်တော့ welcome :)
မမရေ ကိုကိုနိ မမနိဆီသွားလို့ရဘူး မမထုံသင်း လုပ်ပါအုံး
အော တော်တော်ရက်စက်တဲ့ မမနိစ်